Apple dia afaka mampiseho solomaso virtoaly virtoaly amin'ny 2017 | Avy amin'ny mac aho
Apple dia afaka mampiditra solomaso virtoaly virtoaly amin'ny 2017
Tamin'ny 5 Febroary, tao amin'ny fandaharana malaza "Ity herinandro ity amin'ny haitao", ny mety hisian'ny fifanakalozan-kevitra dia ny nanolotra satroka na solomaso ho an'ny zava-misy virtoaly ataon'ny orinasan-tsarimihetsika malaza momba ny sary. Carl Zeiss. Nandray anjara tamin'ilay fandaharana izy ireo Leo Laporte, Georgia Dow, ary Peter Cohen ary mpampiantrano Scoble dia tsy nanome fampahalalana bebe kokoa momba izay navoaka hatreto, fa nanao izany izy ireo. Nanamboatra fanambarana mety ho an'ny fahavaratra 2017 na volana voalohan'ny 2018 izy ireo.
Toa Apple dia nanararaotra ny zava-misy marina mifandraika amin'ny orinasa hanolotra ny solomasony, toy ny fitokanana ny foibe Apple vaovao na ny fankalazana ny 10 taona amin'ny iPhone.
Raha ny filazan'i Scoble, mifandraika amin'ny fanambarana nataon'i Apple dia nilaza izy fa:
Mety ho lova Tim Cook io… raha ny marina dia lova navelan'i Steve Jobs ihany koa.
Carl Zeiss dia manana maodely virtoaly virtoaly eny an-tsena. Momba ilay maodely VR One Plus, headset izay manana telefaona anatiny, mamadika azy ho rafitra virtoaly virtoaly, mitovy amin'ny Samsung Gear VR o Google Daydream.
Fa kosa, nandray anjara tamin'ny volana Janoary lasa teo i Zeiss tao amin'ny Fampisehoana elektronika ho an'ny mpanjifa, saingy tsy nanolotra na inona na inona mifandraika amin'ny zava-misy virtoaly. Araka ny voalazan'i Scoble, Apple dia tokony hangataka tsiambaratelo amin'ny orinasa hisorohana ny karazana tsaho na fivoahana.
Apple dia liana tamin'ny zava-misy virtoaly, araka ny tenin'i Tim Cook manokana. Saingy tsy mazava ny fomba fampiroboroboany ny vokatra ao amin'io sehatra io.
Tamin'ny famelabelarana ny valiny natao tamin'ny volana jona lasa teo, Tim Cook dia nametra ny tenany hiteny hoe:
Mino izahay fa misy zavatra tsara ho an'ny mpanjifa ary fotoana lehibe ahazoana miasa. Ka dia manambola izahay.
Mikasika ireo tsaho, tsy afaka mandà na manamafy na inona na inona momba izany izahay. Inona no atao hoe fanamafisana, ny hetsika amin'ny fandraisana mpiasa ho an'ny departemanta stratejika, izay mampivelatra ny vokatra sy ny rindrambaiko ho an'ny tsena virtoaly.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Apple dia afaka mampiditra solomaso virtoaly virtoaly amin'ny 2017
Fa maninona ny karatra fanomezana iTunes no fanomezana tsara indrindra?
New Orleans mihaona amin'ireo tanàna misy fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka ao amin'ny Apple Maps